LED Panel Light, LED High Bay ukukhanya, LED Tri-ubufakazi Light - Faceled Technology
Our iminyaka engu-10 nakho LED ukukhanyisa ucwaningo nentuthuko, ezingaphezu kuka 10,000 amacala yimpumelelo, 50 R & D team. Inani ebusweni zalesi sihlahla 30,000 square metres, mayelana 1,000 abasebenzi zokukhiqiza. Kukhona imikhiqizo self-athuthukile, amanani yokuncintisana, esiwusizo, ezinzile futhi bakwazi ukuhlangabezana nezidingo izimboni ezahlukene izinzuzo imikhiqizo LED. Faceled brand big, wathembela
Funda kabanzi mayelana inkampani yethu
Faceled Technology Co., Ltd Limited iyinhlangano nomakhi professional esisinikela ngokwawo okuklama, asathuthuka, ezokukhiqiza kanye nokumaketha nokusebenza okusezingeni kwaholela imikhiqizo zokukhanyisa izicelo ahlukahlukene ngokusho izidingo customers`. Imikhiqizo yethu uhla lihlanganisa modules Kwaholela, tube Kwaholela, izibani Kwaholela, strip kwaholela, wahola iKhabhinethi, kwaholela panel ukukhanya, njll, ezithengiswa kahle kakhulu eYurophu, eNyakatho Melika, e-Asia, e-Australia, njll
I Off-Grid Energy Australia Advantage
esebenzelana kuphela LED Outdoor Lights. Imikhiqizo yethu ezinkulu zihlanganisa: LED kukaZamcolo Lights, LED High Bay Lights, LED Umhubhe Lights and LED Street Lights. Imikhiqizo kabanzi uZamcolo Lighting, ishede kanye Workshop Lighting, Umhubhe ezibani Street Lighting njll
By iqhakambisa kagesi kokungathathi hlangothi endleleni ezishisayo e LED kanye negumbi ezishisayo ukushisa usinki, kanye nokuxazulula inkinga ukushabalalisa ukushisa esikhundleni Driver LED, imikhiqizo ukujabulela ukuphila isikhathi eside. Ngaphandle, yonke imikhiqizo kudlule uvivinyo ukuvikelwa kanye ukuguga test, i-Chips LED sisebenzisa pass LM70 Standard
Experience & Izitifiketi
Yonke imikhiqizo yalo ukujabulela iminyaka 3-5 iwaranti. Le nkampani Kwadlula ISO9001: 2008, futhi imikhiqizo yayo sengisilethe izitifiketi like CE, ETL, CB, TUV, SAA, ERP njll
Banamathele isimiso amakhasimende ngamakhasimende nokudayisa Consultative siphikelele ekuhlinzekeni eyodwa kuya kwenye isevisi futhi sisekele "lunye, ubuqotho, service and win-win," ibhizinisi ifilosofi, FACELED uyakwazi ukuthuthukisa ne amakhasimende kanye sifinyelele ezosiza win-win .